नेपाल सरकारकाे निकायले ११० फेसबुकको विवरण माग्यो, कतै तपाइँको त परेन? - jillakhabar.com Nepal's No1 News site
Home अचम्मका खबर नेपाल सरकारकाे निकायले ११० फेसबुकको विवरण माग्यो, कतै तपाइँको त परेन?
नेपाल सरकारकाे निकायले ११० फेसबुकको विवरण माग्यो, कतै तपाइँको त परेन?
on: ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार २१:५४
काठमाडौ, ८ जेठ २०७५ ।
नेपाल सरकारका निकायले सन् २०१७ मा फेसबुकसँग १ सय १० वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग गरेको छ । फेसबुकले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टमा नेपाल सरकारबाट पटक पटक गरी एक सय १० फेसबुक एकाउन्टको विवरण माग भएको जनाएको छ । माग गरिएका सबै एकाउन्टको विवरण भने दिइ नसकिएको फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरवर्ग ले जनाएका छन् । सन् २०१७को जनवरीदेखि जुनसम्ममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट ४३ पटकमा ६७ वटा एकाउन्टसम्बन्धी विवरण माग भएको थियो । तीमध्ये ४१ वटा एकान्टको विवरण कानुनी प्रक्रियाको क्रममा माग गरिएको थियो । २ वटा एकाउन्ट विवरण भने आपत्कालिन परिस्थितिमा माग भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
फेसबुकले सरकारबाट आउने विवरण उपलब्ध गराउनु अघि आफूले कानुनी पक्ष बुझेर मात्रै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छ । विभिन्न सरकारी निकायले मागेको विवरण उपलब्ध गराउँएको अधिकांश घटनामा फेसबुकले प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराउँदैन । सन् २०१३ मा भने विश्वभरबाट ६० लाख गोप्य सुचना चुहावट भएका थिए ।
सुन काण्डः एकपछि अर्काे गर्दै २८ जना थुनामा